न्यायिक सफाईपछि महरा सभामुखमा पुनस्र्थापित किन नहुने ? - Jhilko
कृष्णबहादुर महराको निजी जीवन र राजनीतिक करिआरमाथि लागेको ग्रहण धेरै हटेको छ । बलात्कार प्रयासको अभियोगमा दण्डित गर्ने प्रयासमा उनलाई अन्तिममा न्यायालयले नै सफाई दिएको छ । महराले आफूमाथि लागेको अभियोगमा पाँच महिने कानुनी लडाईपछि मात्रै सफाई पाए । असोज १२ गते आरोपित भएर असोज १४ मा सभामुखको पदबाट राजीनामा गर्न वाध्य महरामाथि लागेको ग्रहण फाट्न फागुन ५ सम्मको दिन कुर्न प¥यो । ढिलै भयो, तर अदालतले नै सफाई दियो तत्कालीन सभामुख महरालाई । महरालाई जेल पठाएर उनको जीवन करिअर र पूर्व माओवादी नेतृत्वको तेजोवध गर्न उद्धत राज्य शक्तिको एउटा तप्का हारेको छ ।
यो जीत महराको एक्लो जीत मात्रै होइन, १० वर्षे जनयुद्धमाथि लागेको आरोप र त्यो विद्रोहको औचित्यमाथि गर्न खोजिएको संगठित प्रहारको एक हदसम्मको पराजय पनि हो । महराको अप्रमाणित आरोपलाई देखाएर माओवादीको युद्धकालीन योगदान र नेतृत्वको खलनायकीकरणका अनेक तुरुप राज्यसत्ता निकटहरुबाटै नग्न रुपमा देखाइए । तर, पनि न्याय मरेन र न्यायले मारेन, महरा र महराको राजनीतिक विरासतलाई । यस अर्थमा महराको यो जीत निजी जीवनको खुसी मात्रै होइन, जनयद्धकालीन माओवादी बलिदान र संघर्षको पनि जीत र खुसी हो ।
न्यायलयबाटै आरोपको दाबी नपुगेको ठहर भई निर्दोष सावित भएपछि अब राजनीतिक करिअरमा लागेको उनको दाग सकिएको छ । न्यायिक रुपमा नै बेदाग साबित महरा फलतः निर्वाचित माननीयमा यथावत रहने छन् । महराको सांसद पद पनि खुस्काउन अनेक चुकुल र छिद्रा खोज्ने समूह पनि धुलोमा विलीन भएको छ । अब युद्धकालदेखिका सबैका सम्मानित महरा सर, माननीयको हैसियतमा त सिंहदरवारमा स्वतः पुनस्र्थापित भएका छन् ।
तर, महरा सभामुखमा बहाल रहेकै बेलामा आरोपित र पदमुक्त गरिएका हुन । यसकारण उनी पूर्ववत सभामुखमा पुनस्र्थापित हुन सक्छन कि सक्दैनन् ? पार्टीले उनलाई सभामुखको पूर्व हैसियतमा फर्काउँछ कि फर्काउँदैन ? महराले सफाई पाएपछि आम रुपमा उठेको अनुत्तरित राजनीतिक प्रश्न यही हो । जब आफूमाथि लागेको दागलाई न्यायालयले नै बेदाग प्रमाणित गरिसक्यो भने पार्टीले अब महरालाई न्याय दिनुपर्छ कि पर्दैन ? पार्टीका लागि जीवन सुम्पेका महरालाई अब न्याय दिने पालो उनैले हुर्काए, बढाएको पार्टी नेकपाको नै हो ।
महराले आफूमाथि लागेको आरोप छानबिन होस भनेर राजीनामा दिएका थिए असोज १४ मा । उनीमाथिको आरोप करीब पाँच महिने न्यायिक छानबिनपछि गलत साबित भयो । अब उनले पूर्ववतः हैसियतमा फर्कने बाटो न्यायिक रुपमा खुल्ला भएको छ । तथापि, यसबीचमा संसदले सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटालाई निर्विरोध चयन गरिसकेको छ । त्यसैले व्यवहारतः प्राविधिक रुपमा भोलि नै महरालाई सभामुखको कुर्सीमा बस्न मिल्ने अवस्था छैन । तर यसको मतलव तत्कालिन सभामुखमाथि लागेको आरोप न्यायलयले निरुपण गरेकाले उनको तत्कालीन हैसियत कायम रहनु पर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त नै हो । यो विषयमा अब सत्तारुढ नेकपा बिना पूर्वाग्रह खुल्ला भएर महराको अवरुद्ध राजनीतिक करिअर र हैसियत स्पष्ट पार्न र उनलाई पूर्ववत हैसियतमा पुनस्र्थापित गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।
संकट बाजा बजाएर आउँदैन । ‘दशा’ लागेको कसैले देख्दैन । महराका सामान्य मानवीय कमजोरीका कारण यो स्तरको अकल्पनीय आरोपका मतियार बने वा बनाइए । मानवीय त्रुटी वा भूल केही भएका थिए भने पनि त्यसैमा टेकेर महरालाई यो हालतमा पु¥याउन देशी विदेशी संगठित र सुनियोजित षडयन्त्र थियो भन्ने सबैका सामु एक कान दुई कान मैदान भइसकेको छ ।
अरु सबै बनिबनाउ जवाफका लागि घटेका घटाइएका घटना थिए, सिनेमाका दृश्य जस्तै । तर एमसीसीका विपक्षमा उभिने महराको चट्टानी अडान नै उनलाई सभामुखबाट पदमुक्त गर्नेदेखि कारागार पु¥याउनेसम्मको भित्री खेलको मुख्य कारक र कारण थियो । अहिले एमसीसीका पक्षमा जसरी देश र स्वयम् नेकपा नै विभाजित छ, त्यसका सूत्रधार उनै उतिबेलाका सभामुख महरा थिए । जसोजसो सरकार, उसैउसै सदर गरिदिएका भए महराकाण्डको यो असफल अराजनीतिक नाट्य मन्चन नै नबुनिन सक्थ्यो ।
महाराले एमसीसी संसदको अघिल्लो अधिवेशनमा पारित नगराएर गल्ती गरे भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पटकपटकको रेकर्डेड भर्सनले नै महरामाथि एमसीसी पक्षधरहरुले योजनावद्ध षडयन्त्र गरेका थिए भन्ने तथ्य स्वयं स्थापित भइसकेको छ । महरालाई एमसीसी अघि नबढाएको प्रतिशोधमा नै कारागारसम्म धकेलिएको सत्य अब दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ ।
पूर्व महान्याधिवक्ता समेत रहेका महराका पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले समेत इजलाशदेखि मिडियासम्म बारम्वार भन्दै आएका छन, महरा ठूलो षडयन्त्रको शिकार भएका हुन । एमसीसी नै महराको राजनीतिक करिअर र विरासत खुइल्याउने अस्त्र बनाइएको थियो । उतिबेला सभामुखका रुपमा एमसीसी खुरुक्क पास गरिदिएका भए महरा अहिले पनि सभामुखमा त कायम रहन सक्थे होलान, तर एमसीसीबारे सिंगो देश यति धेरै गम्भीर बहसमा सामेल हुन पाउँदैन थियो ।
युद्धकालदेखि शान्तिकालको राजनीतिमा सधै बदनामीको भारी आफूले बोकेर पार्टी र प्रमुख नेतालाई सधै शिरमा बोकी हिडेका महरालाई अभियोग लाग्ना साथ पार्टीले कुनै छानबिन नै नगरी उल्टो मानसिक र मनोवैज्ञानिक टर्चर दियो । पार्टीले महराकाण्ड व्यक्तिगत चारित्रिक कमजोरी हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने गरी रहस्यमयी मौनता साँध्यो । यो राम्रो होइन ।
चौतर्फी असहयोगका वावजुद न्याय जीवितै रहेको नजिरसहित कारागारमुक्त भएका महराले अब निसन्देह उनको राजनीतिक उचाईमा पुनस्र्थापित हुन पाउनु पर्छ । उनलाई संवैधानिक र कानुनी उल्झनहरुलाई उछिनेर उनको पूर्ववत हैसियतमा फर्काउन मुलतः नेकपा नेतृत्वले विशेष पहलकदमी लिनै पर्छ । महराले पार्टीको, युद्धकालको र शान्तिकालका आफ्ना योगदान विरुद्धका लडाई पाँच महिने ग्रहण पार गरेसँगै जितेका छन् । यो सुखद पक्ष हो । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
सभामुखसँग युरोपेली मुलुकका राजदूत तथा राष्ट्रसङ्घीय प्रतिनिधिद्वारा भेट
कोरोना बिरुद्ध पश्चिमाहरुको रोइकराई र नेपाल
गृहमन्त्रीसँग बेलायती राजदूतको भेट
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘वादल’ सँग नेपालका लागि बेलायती राजदूत रिचार्ड मोरिसले...
दिल्लीमा भीषण आगलागी चालिसको जिवितै उद्धार
केहीदिनदेखि भइरहेका आगलागीका घटना मध्ये बिहीबार भएको पछिल्लो घटनामा परेका ४० जनालाई...